सरकारी डाक्टरहरूले बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म निजीमा काम गर्न नपाउने! » Nepal Europe News
Nepal Europe News
1st Nepali Online Portal of Europe
Home > Feature News > सरकारी डाक्टरहरूले बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म निजीमा काम गर्न नपाउने!
सरकारी डाक्टरहरूले बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म निजीमा काम गर्न नपाउने!
NepalEurop January 26, 2017 January 26, 2017 Feature News, प्रमुख समाचार, समाचार, स्वास्थ्य	0
निजी अस्पतालमा काम गर्ने स्वीकृति खारेज
– अतुल मिश्र, काठमाडौं
माघ १३, २०७३- स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म कुनै पनि चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा अभ्यास गर्न नपाउने बताएका छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा सरकारी सेवाभन्दा बाहिर काम गर्न सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । थापाले स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी सेवाभन्दा बाहिर काम गर्न सरकारबाट लिएका स्वीकृतिहरू समेत खारेज गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन् ।
निजीमा काम गर्ने कसैले स्वीकृति लिएको र कसैले नलिएको पाइएकाले एकरूपता ल्याउन हालसम्मका सबै स्वीकृति खारेज गरिएको उनले जनाएका छन् । अब ९ बजे देखि ३ बजेसम्म बाहेकको समयमा निजी क्षेत्रमा काम गर्न चाहने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले २०७३ फागुन मसान्तभित्र निवेदन दिएर सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने मन्त्री थापाले जनाएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले सरकारी अस्पताल नचल्नुको कारण चिकित्सक नबस्नु रहेको समेत बताए । जिल्लाका केही सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक दिउँसो ११ बजे नै निजी क्लिनिकमा काम गर्न जाने गरेको आफूले अनुगमनमा पाएको उनले जनाए । उनले सरकारीमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म निजीमा भेटिए निजी स्वास्थ्य संस्थासँगै त्यहाँ काम गर्ने सरकारी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीसमेत कारबाहीमा पर्ने बताए ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो सूचनापाटीमा त्यहाँ कार्यरत सरकारी चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको नाम र अनुमति लिएको विवरण समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । थापाले नियम पालना नगर्ने संस्थाको सञ्चालन अनुमतिसमेत खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीले बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म संस्थामा सेवा दिनैपर्छ । यस्तै ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म विस्तारित स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पालो पर्नेले बस्नुपर्छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत तलबको ५० प्रतिशतसम्म थप सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
प्रकाशित: माघ १३, २०७३
News Source: Kantipur
अब मन्त्रालय नै खारेज गरिदिए हुने भो : गरिबी निवारणमन्त्री थानी
मायाको प्रतीक ‘रानीमहल’ र प्रणय दिवस !
सत्तारूढ दलहरुले सर्वसत्तावादी शैली लाद्न खोजेः देउवा
भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता पाँच सय
निर्वाचन आयोगद्वारा चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक, मनोनयन दर्ता वैशाख १६ मा